“Waxa Uu Ahaa Rigoore Aan Ahayn Rigoore” – Garsoore Sports
“Waxa Uu Ahaa…
Garab weerarka xulka kubbada-cagta Ingiriiska Raheem Sterling ayaa maanta heysta hadalheynta ugu badan ee kubbada-cagta kaddib markii lagu eedeeyay inuu is tuuray markii Ingiriiska lagu abaalmariyay rigooradii Harry Kane ee u sahashay in kaddib markii laga badbaadiyay ku celiskii la helo bartilmaameedka, taasoo daqiiqaddii 104aad ee cayaarta Ingiriiska u dirtay Fiinaalka tartanka Euro 2020.
Ku celisyada qaabkii ay rigoorada ku timid kama muuqdaan in Sterling uu jalaafo ka helay daafac Maehle balse inuu istuuray ayaa muuqaneysa.
Taageerayaasha way ku kala qeybsameen in rigoorada la bixiyo ay tahay go’aanka sax ah iyo in kale, laakiin Sterling qudhiisa ayaa kalsooni ku qabay in si cadaalad daro ah loo tuuray oo aanu isagu jilliin sameeyn.
Sterling ayaa u sheegay ITV ciyaarta kaddib: “Waxaan galay sanduuqa isaguna (Maehle) lugtiisa ayuu igu celiyay oo wuxuu taabtay lugtayda, sidaas darteed waxay ahayd rigoore cad.”
Balse tababaraha xulka Denmark Kasper Hjulmand, ayaa qaba fikrad taas ka duwan isagoo ka xumaaday inuu arko semi-finalka yurub oo uu go’aamiyay rigoore muran dhaliyay iyo diidmo ah in kubbad labaad garoonka dhexdeeda ay ku jirtay waqtigaas.
“Waxa uu ahaa rigoore aan ahayn rigoore, ”ayuu ku yiri Sky Sports News. Waa wax aniga haatan iga careysiineysa. Aad ayaan uga niyad jabnay. Ma dhaafi kartid kubbada garoonka dhexdeeda taas oo saameyn badan ku leh ciyaarta.”
“Laakiin sidaan oo kale in nalooga adkaado waa wax laga xumaado maxaa yeelay nimankan wax badan bay dagaalameen.”